Ilali likaJoanna Gaines leKrisimesi ye-DIY evela eMagnolia Line Iyamangalisa - Uyilo Lokuphefumlela
Ilali likaJoanna Gaines leKrisimesi ye-DIY evela eMagnolia Line Iyamangalisa
Yiyekele kuJoanna Gaines ukuze ikhadibhodi ibonakale ngathi iyathandeka. Inkwenkwezi yangaphambili ye-HGTV kunye noyilo-lwe-extraordinaire luye lwalahla ulongezo olufanelekileyo kukhenketho lwakho lweholide kuye Kwibhlog yasekhaya: ilali yeKrisimesi ye-DIY . Cinga izindlu ze-gingerbread, kodwa zomelele ngakumbi (kwaye zincinci ngendlela).
Akukho kuphela kwilali yakhe encinci yekhadibhodi emnandi ngokulula-kwaye kulula ukuyenza ngobuhlanya. Into oyifunayo ziitemplate zoyilo, isikere, iglu, kunye ne-voila! Iitemplate ziyaprintwa kwaye zinokusetyenziselwa ukwakha amakhaya amancinci, aphakathi, okanye amakhulu. Elona candelo lililo, simahla.
Landela ibhlog yakho ukubona indlela yokubeka izindlu kunye nendlela yokongeza ubuntu obuncinci-Ukuzuza kwenza ukuba kube lula kakhulu ukongeza uyilo oluchukumisayo olufana nokucheba kunye nokujija ikofu kunye nezinti ze popsicle. Nje ukuba isiseko kunye neenkcukacha zongezwe ungakhetha ukugcina izindlu zakho ezincinci zingenanto okanye uzipeyinte ukuze zihambelane nokuhombisa kwakho.
Ukwakha izindlu ezincinci yimpepho, kwaye ulwakhiwo lweKrisimesi yeLali ngumsebenzi omkhulu wosapho lonke oya kukungenisa Umoya weKrismesi . Abantwana abancinci nabadala banokuphatha ukusika, kwaye ukuhombisa ngokucacileyo kuyonwabisa kuwo wonke umntu. Ngenxa yokuba izindlu zenziwe ngekhadibhodi, ungazigcina ngokulula kwaye wenze isiko losapho ngokungongeza ezinye izindlu kwilali yakho minyaka le. UJoanna, uyenzile kwakhona.
bonisa imifanekiso eludongeni
Umququzeleli womnyango wekhabhathi yekhitshi
flip okanye flop uhlaziyo lomtshato
umnyango omnyama oluhlaza okwesibhakabhaka